Nnwom 135 NA-TWI - Ayeyi dwom - Kamfo Awurade! Monkamfo ne - Bible Gateway
Nnwom 134Nnwom 136
Nnwom 135 Nkwa Asem (NA-TWI)
135 Kamfo Awurade! Monkamfo ne din, Awurade asomfo 2 a, mugyina Awurade fi a ɛyɛ Onyankopɔn fi hɔ no. 3 Monkamfo Awurade efisɛ, oye. Monto ayeyi nnwom wɔ ne din mu efisɛ, ne yam ye. 4 Oyii Yakob maa ne ho na oyii Israelfo sɛ n’ankasa ne de.